A man stands at the scene of a bus crash in Rusape about 170 kilomertes east of the capital Harare, Thursday, Nov. 8, 2018. A head-on collision between two buses has killed 47 people, where road accidents are common due to poor roads and bad driving. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (Source: Tsvangirayi Mukwazhi)
Women walk by the scene of a bus crash in Rusape about 170 kilometres east of the capital Harare, Thursday, Nov. 8, 2018. A head-on collision between two buses has killed 47 people, where road accidents are common due to poor roads and bad driving. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (Source: Tsvangirayi Mukwazhi)
People react after hearing news about their relatives, after a bus crash in Rusape about 170 kilometres east of the capital Harare, Thursday, Nov. 8, 2018. A head-on collision between two buses has killed 47 people, where road accidents are common due to poor roads and bad driving. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (Source: Tsvangirayi Mukwazhi)
A woman who survived a bus crash receives treatment in Rusape about 170 kilometres east of the capital Harare, Thursday, Nov. 8, 2018. A head-on collision between two buses has killed 47 people, where road accidents are common due to poor roads and bad driving. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (Source: Tsvangirayi Mukwazhi)
Klavan Munyisa who is 3 months old lays in a hospital bed after surviving a bus crash in Rusape about 170 kilometres east of the capital Harare, Thursday, Nov. 8, 2018. A head-on collision between two buses has killed 47 people, where road accidents are common due to poor roads and bad driving. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (Source: Tsvangirayi Mukwazhi)